AMSIOM Oo Xaqiijisay In Amaanka Kismaayo Laga Wareejinayo Milateriga Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Taliska Ciidanka AMISOM ayaa ka warbixiyey war dhowaan soo shaac baxay oo ah in Ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo laga qaadayo halkaas, islamarkaana magaaladaas la geynayo ciidamo kale oo ka socda Afrika.
Afhayeenka AMISOM Col. Cali Xaamuud oo la hadlayay BBC-da ayaa sheegay in Ciidamada Kenya ay intood badan kawada bixi doonaan magaalada, islamarkaana ay amaanka Kismaayo la wareegayaan ciidamada Burundi iyo Sierra Leone.
Wuxuu sheegay Col. Xumud iney Kismaayo sii joogi doonaan tiro yar oo ka mid ah ciidamada Kenya, islamarkaan taliska aagaas ay qaban doonaan ciidamada ka socda dalka Sierra Leone.
“Ciidamada Kenya kama wada baxayaan Kismaayo, Ciidamada Burundi iyo Sierra Leone ee la geyn doono ayay kala shaqeyn doonaan arrimaha ammaanka” ayuu yiri Col. Xumud.
Mar la weydiiyay sababta keentay in is bedelada ay dhacaan ayuu sheegay in ciidamada Itoobiya ay ku soo biireen howl galka AMISOM, isla markaana ciidamada la wareegeen qeybta Baydhabo oo ah qeybta saddexaad, isagoo tilmaamay in Ciidamada Uganda iyo kuwa Brundi ay kala wareegeen qeybtaas.
“Waxaa keenay is bedeladaas inay dhacaan waxaa ka dambeysay ciidanka Itoobiya oo Mas’uuliyada AMISOM soo hoos galay qeyb ayuu ka qaaday doonaa, waxayna hogaanka u heynayaan qeybta saddexaad, qeybta koowaad waa Muqdisho, qeybta labaad waa Labada Shabelle oo Ciidamada Brundi iyo Uganda ay hogaanka heynayaan, qeybta afaraad waa tan Hiiraan”ayuu yiri Afhayeenka Ciidamada AMISOM.
Sida qorshaha ah, ilaa 200-askari oo Ciidamada Kenyaatiga ayaa baaqi kusii ahaan doona magaalada Kismaayo.
Ka bixista Ciidamada Kenya ee Kismaayo ayaa ka dambeysay kadib markii Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ku dacweysay Midowga Afrika, iyadoo ku eedeysay in dhex dhexaad ka ahayn arrimaha magaalada Kismaayo.